UKumkani Henry I waseJamani - uHenry the Fowler - iDuke waseSaxony
UHenry I waseJamani wayeyaziwa nangokuthi:
UHenry the Fowler; ngesiJamani, uHenrik okanye uHeinrich der Vogler
UHenry I waseJamani wayeyaziwa ngokuba:
Ukusungula ubukhosi bukaSaxon ookumkani nabalawuli baseJamani. Nakuba engazange athathe igama elithi "uMlawuli" (unyana wakhe u- Otto wayengowokuqala ukuvuselela isihloko emva kweeminyaka emva kweCarolingians), abalawuli bexesha elizayo babeza kubala inani "likaHenrys" ekubuseni kwakhe. Indlela ayenayo ngayo isiteketiso sakhe engaqinisekanga; Ibali elinye linalo lokuba wayebizwa ngokuthi "inhlanzi" kuba wayebeka iintyantyambo zeentaka xa ekwaziswa ngonyulo lwakhe njengenkosi, kodwa loo nto mhlawumbi iyinyani.
Ozelwe: c. 876
Iba yiDuke yeSaxony: 912
Iindlalifa eziqeshwe kuConrad I waseFranconia: 918
Ukhethiweyo ukumkani ngamagosa aseSaxony naseFranconia: 919
Ukuxhathisa iMagyars e-Riade: ngoMatshi 15, 933
Wafa: uJulayi 2, 936
Mayelana noHenry I waseJamani (uHenry the Fowler):
UHenry wayeyindodana kaOtto oLungileyo. Watshata noHatheburg, intombi yenani lakwaMerseburg, kodwa umtshato wachazwa mthethweni kuba, emva kokufa komyeni wakhe wokuqala, uHatheburg waba yindoda. Ngo-909 watshata noMatilda, intombi yenani laseWestphalia.
Xa uyise wafa ngo-912, uHenry waba nguDuke waseSaxony. Emva kweminyaka emithandathu, uConrad I waseFranconia wakhetha uHenry njengendlalifa yakhe ngaphambi kokuba afe. UHenry ngoku ulawula ezimbini zezona ziqhumbuza ezine ezibalulekileyo eJamani, iziqhwala ezamkhetha ukuba abe ngukumkani waseJamani ngoMeyi ka-919. Kodwa ke, ezinye iibhuki ezibalulekileyo, eBavaria neSerbia, azizange zimbone njengobukumkani wazo.
UHenry wayenentlonelo yokuzimela kweengqungquthela ezahlukahlukeneyo zaseJamani, kodwa wayefuna ukuba bahlangane kwi-confederation. Wakwazi ukunyanzela iBurchard, umbutho waseSerbia, ukuba angenise kuye ngo-919, kodwa wavumela iBurchard ukuba igcine ukulawula kolawulo phezu kwayo. Ngaloo nyaka, abantu baseBavaria nabaseMpumalanga baseFrank bakha u-Arnulf, umbusi waseBavaria, njengenkosi yaseJamani, no-Henry bafumana umngeni ngemikhankaso emibini yempi, baxinze uArnulf ukuba angenise ngo-921.
Nangona u-Arnulf wamisa ibango lakhe etroneni, waqhubeka elawula i-duchy yakhe yaseBavaria. Kwiminyaka emine kamva uHenry watsho uGiselbert, ukumkani waseLotharingia, waza wabuyisa ummandla phantsi kolawulo lwesiJamani. UGiselbert wavunyelwa ukuba ahlale ephethe uLotharingia njengombusi, kwaye ngo-928 watshata nentombi kaHenry, uGerberga.
Ngo-924 umhlanga waseMagyar wesizwe wahlasela iJamani. UHenry wavuma ukuba ahlawule umvuzo aze abuyisele umphathi wenkampu ngokutshintshana iminyaka engama-9 ejonge ukuhlaselwa kumazwe aseJamani. UHenry wasebenzisa ixesha ngokufanelekileyo; Wakhela iidolophu ezinqatyisiweyo, abaqeqeshiweyo abaxhobileyo emkhosini onamandla, kwaye wabakhokelela ekunqobeni okunzima kwiintlanga ezahlukahlukeneyo zamaSlavic. Xa umnyaka wesithoba oneminyaka engapheliyo, uHenry wenqaba ukuhlawula umvuzo, kwaye amaGyars aphinde ahlasele. Kodwa uHenry wawabethelela e-Riade ngo-Matshi ka-933, ekugqibeleni amaJalimane asongela amaJamani.
Iphulo likaHenry lokugqibela lalihlasela iDenmark apho ummandla waseSchleswig waba yinxalenye yeJamani. Indodana eyayinayo noMatilda, uOtto, yayiza kumphumelela njengenkosi ibe nguMlawuli oyiNgcwele oyiRoma u-Otto I-Great.
Uncedo olungaphezulu kukaHenry the Fowler Resources:
UHenry the Fowler kwiWebhu
I-Concise bio kwi-Infoplease.
Ingqungquthela evela kwaBantu abaBamkelekileyo bama-Middle Ages nguJohn H. Haaren
UHenry the Fowler kuPrinta
EJamani kwi-Middle Ages, ngo-800-1056
Umbhalo walolu xwebhu yi-copyright © 2003-2016 uMelissa Snell. Ungayilanda okanye uprinte le dokhumenti ngokusetyenziswa kobuqu okanye esikolweni, nje kuphela i-URL engezantsi ifakiwe. Imvume ayinikezelwa ukuvelisa eli xwebhu kwenye iwebhusayithi. Ukukhuphela imvume, nceda uqhagamshelane noMelissa Snell.
Indlela yokudibanisa "i-Guérir" (ukunyanga, ukuphilisa, ukubuyisela)
I-Shakespeare Authorship Controversy iyaqhubeka